Inkcazo kunye neMimiselo yezizathu zokubhala
I- motif yimixholo ephindaphindiweyo, iphethini yesandi, okanye iyunithi elandayo kwisicatshulwa esisodwa okanye inani leetekisi ezahlukeneyo. I-Adjective:
Uluhlu uWilliam Freedman ugxininisa uhlobo lofuziselo lwempawu, oluchaza ngokuthi "ubunzima beengxenye ezihlukeneyo ngokuphindaphindiweyo ngokuphindaphindiweyo kwinqanaba elinye lwenzeka ntoni kwelinye" ("I-Motif Literary: Inkcazo noVavanyo").
Ukususela kwisiLatini, "hambisa"
" Umxholo wokulahlelwa kunye nomzekelo wabazali ababini okanye abaninzi bahlala kwiincwadi zeHarry Potter."
(ULana A. Wenyuka, I-Ivory Tower kunye noHarry Potter . University of Missouri Press, 2004)
I-Motif kwi-EB White's Stuart Little
"Ukutshatyalaliswa kukaStuart, ukuphazamiseka kwalo mzamo wokubamba ubuhle kunye nenyaniso ecacileyo, kunika intsingiselo ekufuneni kwakhe uMargalo, umxholo apho le ncwadi iphela."
(Scott Elledge, EB White: I-Biography . WW Norton, 1985)
Yintoni kwaye ayiyiyo ifomu
Umama onjalo akunjalo. Umama onobukrakra uba ngumnye kuba ubuncinci bacinga ukuba akaqhelekanga. Iinkqubo eziqhelekileyo zobomi azikho izizathu. Ukuthi 'uJohn wayegqoke kwaye ehamba edolophini' akuyi kunika umzekelo owodwa ufanelekile ukukhumbula; kodwa ukuthetha ukuba iqhawe libeke phezu kwekhanda lakhe lokungabonakali, libeke umatshini walo omatshini, kwaye liya ezweni elisempumalanga ilanga nentshonalanga kwenyanga kukubandakanya ubuncinane ubuncinane bane-cap, iphepheni, uhambo lomlingo womoya, kunye nomhlaba omangalisayo. "
(UStith Thompson, i- Motif-Index yoLuntu lweNcwadi . I-Indiana University Press, 1972)
"[I-motif] ngokuqhelekileyo isimboli- oko kukuthi kubonakala ukuba kuthwala intsingiselo ngaphaya kweyinyani ngokukhawuleza kubonakala; imela kumgangatho wezantetho into ephawulekayo yesakhiwo somsebenzi, iziganeko, abalinganiswa, iziphumo zomzwelo, okanye imilinganiselo yokuziphatha okanye ingqiqo, iboniswe kokubili njengento yokuchazwa kwaye, ngokuphindaphindiweyo, njengengxenye yesigidimi somlobi kunye nesichazi- magama esichazayo kwaye ngokubalulekayo kufuna ukuba ubuncinci obuncinane bokuphindaphinda kunye nokungenakwenzeka ukuze zenzele ubuncinci kwaye zibonise ukuzithoba kwayo. Ekugqibeleni, i-motif ifezekisa amandla ayo ngokulawulwa okufanelekileyo kolo hlobo kunye nokungafaneki, ngokubonakala kwayo kwiimeko ezibalulekileyo, ngokwezinga apho amaqela ngamnye asebenza kunye ekupheleni kwesinye isigqibo okanye iphelile kwaye, xa lifanekisela, ngokufanelekileyo kwayo kwinjongo yomqondiso okanye injongo. "
(UWilliam Freedman, "I-Motif Literary Motif: Inkcazo noVavanyo," kwi- Essential of Theory of Fiction , ebizwa ngu-MJ Hoffman kunye no-PD Murphy, iDuke University Press, 1996)
"ULouise Rosenblatt unikeza iindlela ezimbini zeencwadi kwi -Reader, Umbhalo, Iingqungquthela . Iincwadi ezifundwa ngokuzonwabisa ziincwadi zoncedo 'ngelixa iincwadi ezifundwa ngolwazi' zincwadana. 'Nangona enye ifundwa ngokungafihli ngolwazi, enye Kufuneka ukuba iincwadi ezingabonakaliyo zingabonakali kubafundi beencwadi zokufunda, ngokuba zombini ifomu kunye nomxholo kunika umdla kumfundi. igama elithi ' motif ' kunokuba umxholo uchaze ngokucacileyo iingcamango ezahlukahlukeneyo ezinokudada ngaphantsi komntu ongathandwayo. "
(ULynda G. Adamson, isiHlabathi seMathematika kwiNdawo engabonakaliyo kwi- Greenwood, ngo-2006)
Izihloko kunye neeMotif
- "I- motif ayifanele idideke kunye nomxholo , owenza i-unit engabonakaliyo kunye neyonke jikelele ye-semantic yunithi ebonakaliswe okanye yenziwe kwakhona kwi-set of motifs: ukuba iiglasi ziyi-motif kwi- Princess Brambilla , umbono uyisihloko kuloo msebenzi. umzekelo kufuneka kwakhona uhlukaniswe kwi- topos , eyinto ehambelana neenkcukacha ezibonakalayo kwiibhalo (iincwadi) (isilumko esiyilumko, umntwana osekhulile, i- locus amoenus , njl.).
(UGerald Prince, iDictionary Dictionary Narratology , i-University of Nebraska Press, 2003)
- "Ixesha elithi motif likwahlula kwii- semiotics ukusuka kwigama eliqhelekileyo, eliguquguqukayo igama elisetyenzisiweyo, umxholo . Umgaqo oqhelekileyo kukuba umxholo ubonakala ungabonakali okanye ubanzi ngelixa i-motif ikhonkrithi. Umxholo ungabandakanya inkcazo, imbono yokujonga, okanye ingcamango, ngelixa i-motif ingcaciso , ingongoma ethile, ephindaphindiweyo ukwenzela ukuba itekisi ithetha ukuvelisa. "
(Yoshiko Okuyama, iJapan Mythology kwiFilimu .Lexington Books, 2915)
Archetypes ne Motifs
"I- archtype yinto ebalulekileyo ebomini bethu abaqhelekileyo. I- motif iyinxalenye encinci, okanye inxalenye encinane, yamava ethu aqhelekileyo. Konke kokuphindaphindiweyo kubomi bethu kwaye kubonakala kwangaphambili, kuba kubaluleke kakhulu kumava abantu. "U
(URobert Atkinson, Isipho seBali . Greenwood, ngo-1995)
Ukubhengezwa: i -TE-TEE
Matt Redman - I-Biography yeNkokheli yonqulo yamaKristu
Iindlela ezili-7 zokufumana iBhayibhile yamahhala
Egg Magic kunye neNkcubeko
I-USGA, i-R & A iCwebe iSohlwayo sokuGosa ngeGosa leGolf kwiGreen
UYesu Udla amawaka amahlanu: Izonka kunye neentlanzi (Marko 6: 30-44)